Khariidad duug ah oo sanadka "1665" oo muujineysa socdaalka qaarada Afrika, Badweynta Atlantikada maanta ayaa lagu calaamadeeyay Badweynta Itoobiya. Maxuu magaca Badweynta Itoobiya ...	Akhri wax dheeraad ah
Asalka ereyga 'guinea' lama hubo: erayga Guinea wuxuu u muuqanayaa markii ugu horeysay hab gaar ah ee qoraallada ku qoran 1453 ee soo dejinta sheekooyinka safarka ee exploratio ...	Akhri wax dheeraad ah
Koorsada dhexe ee webiga Congo waxay ka bilaabantaa Wagenia Falls. Kalluumeysiga dadka ee Enya (ama Genya) waxay ahaayeen dhaqdhaqaaq dhaqameed oo lagu fuliyay laba marxaladood: subax iyo galab.	Akhri wax dheeraad ah
Magaca LIKASI ee laga soo xigtay DIKASHI, "urta wanaagsan" ayaa ka mid ah magaalooyinka dalxiiska ee Congo-Kinshasa. Waa xarun macdan ah iyo isgaadhsiin muhiim ah oo ay ku leedahay nambarkeeda koowaad ...	Akhri wax dheeraad ah